Accueil > Gazetin'ny nosy > Rasoavololona Alida Sasha : Kolikoly avo lenta no anakonana hosoka avo lenta
Rasoavololona Alida Sasha : Kolikoly avo lenta no anakonana hosoka avo lenta
Miseho azy ho tsy maty manota mandrakizay Rtoa Rasoavololona Alida na i Sasha, izay mpisoloky sy mpanao hosoka avo lenta. Efa navoakanay teto ny fampahafantarana azy ka nanentanana izay mahita azy mba hampandre ny tompon’andraikitra na manam-pahefana satria avo lenta loatra ny hosoka nataony, ary an-jatony tapitrisa ny vola nanaovany hosoka.
Tratry ny hosoka nataony na tompon’andraikitra ara-panjakana na mpandraharaha tsy miankina. Amin’izao fotoana, volabe indray no ampiasain-dRasoavololona Alida (Sasha) mba hiarovany ny tenany tsy ho voakitikitika, ka efa mitady ny fomba hanampenana ny mason’izay manam-pahefana na tompon’andraikitra hiantefan’ny fampitan’ny olona ny misy azy na fampahafantaran’ny olona ny toerana iafenany izy. Izany hoe kolikoly avo lenta indray koa izany izao no entiny iarovana tena hanakonana ny hosoka avo lenta nataony.
Raha ny re anefa dia tsy handefitra intsony ny tompon’andraikitra fa hijoro hampanjaka ny marina sy ny rariny satria tsy misy olona tsy maty manota izany ka hahasahy hanitsakitsaka ny maha-tany tan-dalana an’i Madagasikara eto.
Manamafy ny tompon’andraikitra mba tsy hanana ahiahy ny olona izay mahafantatra ny misy an-dRasoavololona Alida mba hampandre azy ireo fa handray fepetra avy hatrany ny manam-pahefana.